Socdaalka Dugsiga Galbeedka MS ee CECFC - Oktoobar 7th - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Dhacdadani waxa uu joogsadey.
Socdaalka Dugsiga Galbeedka MS ee CECFC - Oktoobar 7th
Ka fogow kulanka xog -ogaalka ah ee dhexdhexaadka ah oo u gudub dalxiis dugsi oo shaqsi ah. CECFC West MS waxay jeclaan lahayd inay kula kulmaan, ku dhex maraan dugsigeena cajiibka ah, oo ay kaaga jawaabaan wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Haddii taariikhaha dalxiiska ee la qorsheeyey aysan ku shaqayn helitaankaaga, waxaad xor u tahay inaad email ugu dirto Madaxa Dugsiga, Lacey Scadden, lacey.scadden@coloradoearlycolleges.org si aad u samaysato wakhti laga yaabo inuu si fiican ugu shaqeeyo jadwalkaaga.
October 7	@ 1: 00 pm	- 2: 00 pm
2130 W Horso Rd, Fort Collins, CO 80526
2130 W Horsuuti Rd.
Fort Collins, Colorado 80526 + Map Google
Ku dar iCalendar
Socdaalka Dugsiga Galbeedka MS ee CECFC - Diseembar 9 -deeda
Diisambar 9 @ 1:00 pm - 2: 00 pm
Socdaalka Dugsiga Galbeedka MS ee CECFC - Diseembar 14th
Diisambar 14 @ 10:00 subaxnimo - 11: am 00
Socdaalka Dugsiga Galbeedka MS ee CECFC - Diseembar 16th
Diisambar 16 @ 1:00 pm - 2: 00 pm
« Socdaalka Ardayga ee Mustaqbalka CECI
Kulanka Xog -ogaalka ah ee CECCR »